မမျှော်လင့် သော လက်ဆောင် တခု | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မမျှော်လင့် သော လက်ဆောင် တခု
မမျှော်လင့် သော လက်ဆောင် တခု
Posted by mandalarthu on Jan 19, 2012 in Creative Writing, My Dear Diary | 12 comments
ပြီးခဲ့ တဲ့ စနေနေ့ (၁၄-၁-၂၀၁၂)နေ့ က မိတ်ဆွေ အမကြီး တယောက်ထံက သူမနဲ့ ခွဲခွာခါနီး
အမှတ်တ၇အဖြစ် သူမဆီကမျှော်လင့် မထားတဲ့ လက်ဆောင်တစ်ခု
၇ရှိခဲ့ ပါတယ်။အဲဒါကတော့သူမ ဟိုးလွန်ခဲ့ တဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာက
သူမတို့ မိသားစု ဗုဒ္ဓဂါယာကိုေ၇ာက်ရှိခဲ့ စဉ်က သူမဖခင်ကြီး ၀ယ်ယူလာခဲ့တဲ့ 
သူမရဲ့ ၇ည်၇ွယ်ချက် က
ဗုဒ္ဓဂါယာကို တခါမှ မေ၇ာက်ဖူးသေးတဲ့ ကျွန်မတို့ မိသားစုကို
နေ့ စဉ် ဒီ ဗုဒ္ဓဂါယာဓာတ်ပုံတွေကို ဘု၇ားစင်မှာ မွန်မွန်မြတ်မြတ်ပူဇော်နေ၇င်
တစ်နေ့ နေ့ တစ်ချိန်ချိန်မှာ ဗုဒ္ဓဂါယာကို မိမိတို့ကိုယ်တိုင်
သွားေ၇ာက်ဖူးမြော်ဖို့ အခွင်အလမ့်း ကြုံလာစေဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။
သူမ၇ဲ့ စေတနာကို တန်ဖိုးထားပြီး ကျွန်မကလည်း ဘု၇ားစဉ်မှာနေ့ စဉ် ပူဇော်ခဲ့ ပါတယ်။
ရုတ်တ၇က် သတိ၇လိုက်မိတာက တော့ကျွန်မတို့ ရဲ့ ဂေဇက် ရွာသူရွာသားတွေကို ပါဘဲ။
ဂေဇက်ရွာထဲ ကလူတွေ အတော်များများ လည်း ဗုဒ္ဓဂါယာကို ကိုယ်တိုင်ေ၇ာက်ဖူးခဲ့ ကြပြီး
ဗုဒ္ဓဂါယာအကြောင်းကိုလည်း ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ ဝေေ၀ဆာဆာ တင် ပြီးခဲ့ ကြပါပြီ။
ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်း ကိုယ်ကိုယ်တိုင် မေ၇ာက်နိုင်သေးတော့ ကြည်နူးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ 
သာဓု အကြိမ်ကြိမ်ခေါ်ဆို ပြီး ဖတ်၇ှုခဲ့ ပြီးပါပြီ။ဒါပေမယ့်
အခု လို မမျှော်လင့် ဘဲ နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကဗုဒ္ဓဂါယာမှ ၀ယ်ယူပူဇော်ထားခဲ့ သော
ဘု၇ားပုံတော်တွေကို လက်ဆောင် အဖြစ်၇ရှိချိန်မှာ ကျွန်မ၇င်ထဲ ကြည်နူးစွာနဲ့ 
လက်ခံပြီး ဂေဇက် အဖွဲ့ သားအားလုံးကိုလည်း
ထပ်မံပြီး ကောင်းသောကုသိုလ်တ၇ားများ ဆင့် ပွား စေ လိုသော ကြောင့် 
ပုံ(၁) က ဓာတ်ပုံတွေထည့် ထားတဲ့အပြင် ကာဗာနှင့်ဂျပ်ထူအိတ်လေးပါ ။
အလယ်ခေါင်မှာလေးထောင့် ကွက်လေးဖောက်ထားတာပါ။ အတော်လေးဟောင်းနွမ်းနေပေမယ့် 
ဓာတ်ပုံတွေက ပို့ စကတ်အရွယ် (၇.၅”x၁၀”)ဆိုက်တွေပါ။
ကြည်လင်ပြတ်သားပြီး ကြည်ညိုဖွယ် ဖူးတွေ့ နိုင်ပါတယ်။မြေပုံအပါအ၀င် စုစုပေါင်းဓာတ်ပုံ(၈)ပုံပါဝင်ပါတယ်။
ပုံ(၂) က ဗုဒ္ဓဂါယာမြေပုံ ပါ။
အကြင်လူတို့ သည် (ဤ သံဝေဇနိယ လေး ဌာနတို ၌)ဘု၇ားဖူး ခရီး လှည့်လည်ပြု၍
ထိုလူအားလုံးတို့ သည် ဤခန္ဓာကိုယ် ပျက်စီး သေလွန်ပြီးနောက်
နတ်ရွာ သုဂတိ သို့ေ၇ာက်ကြကုန်လတ္တံ့ ။
ပုံ(၃) က ဓမ္မေခ စေတီတော်ပါ။
မိဂဒါ ၀ုန်၊ ဗီဟာပြည်နယ် ၊အိန္ဒိယနိုင်ငံ မှာရှိပါတယ်။
အတုမဲ့ဓမ္မစကြာ တ၇ားဦးကို ဟောတော်မူ၇ာ နေ၇ာပါလားဟူ
သွားေ၇ာက်ဖူးမြော် သံဝေဂ ယူသင့် သော ဌာနတစ်ခု ဖြစ်ဧ၊်။
ပုံ(၄)က မဟာဗောဓိ ရုပ်ပွားတော် ပါ။
မဟာဗောဓိ မဏ္ဍိုံင် ၊ဗုဒ္ဓဂါယာ ၊အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပါ။
‘’ မကောင်းမှု ကို မပြုလုပ်၇န်
စိတ်ကို စင်ကြယ်စွာ ထား၇န်
ဤသည်ကား ဗုဒ္ဓဘု၇ား တို့ ဧ၊် အဆုံးအမ (ဗုဒ္ဓသာသနာ တည်း)’’
ပုံ(၅)က ဗုဒ္ဓဘု၇ားရှင် ပ၇ိနိဗ္ဗာန် စံတော်မူပုံ ပါ။
မဟာပရိနိဗ္ဗာန စေတီတော်အနီး ဂန္ဓ ကုဋိ ၊ကုသိနာရုံ ၊ အိန္နိယနိုင်ငံ မှာပါ။
ဤကား မြတ်စွာဘု၇ားသည် ပရိနိဗ္ဗာန် ပြု၍ ၀ိပါတ် ကမ္မဇ၇ုပ် တို့ ချုပ် ငြိမ်း၇ာ
မလ္လာမင်းတို့ဧ။်ကုသိနာရုံ အင်ကြင်းတော နေရာ ပါတကားဟု သဒ္ဒါကြည်ညိုစိတ်ရှိသော
သံဝေဂ ယူသင့် သော ဌာနတစ်ခု ဖြစ်ဧ၊်။
ပုံ(၆)က ဗုဒ္ဓဘု၇ားအလောင်း ဖွားတော်မူပုံ ပါ။
လုမ္ဗနီ ဥယျာဉ် ၊နီပေါနိုင်ငံ မှာပါ။
ဤ ကား ဘု၇ားအလောင်းတော်ဖွားတော်မူခဲ့ ၇ာ
လုမ္ဗနီ အင်ကြင်းတော နေရာ ပါတကားဟူ၍ု သဒ္ဒါကြည်ညိုစိတ်ရှိသော
ပုံ(၇)က ဘု၇ားအလောင်း ဒုက္က၇စ၇ိယာ ကျင့် တော်မူပုံ
ဥရု ဝေလတော ၊ဗီဟာပြည်နယ်၊ အိန္ဒိယ နိုင်ငံ မှာပါ။
ဘု၇ားအလောင်းမှာ ဘု၇ားဖြစ်၇မယ်ဆိုတဲ့ သေချာတဲ့ ပါ၇မီ(ကံ) ရှိတယ်။
ဒါပေမယ့်နန်းတော်ထဲမှာ စောင့် မနေဘဲ တောထွက်ပြီး ခက်ခဲပင်ပန်းတဲ့ 
ဒုက္က ရ စ၇ိယာ ကို (၆)နှစ် ကျင့် ခဲ့ တယ်။(၀ီ၇ိယ) ။
ဒါပေမယ့် ကံနဲ့ ဝီ၇ိယ ရှိရုံတင်မ၇ဘူး။ အသိဥာဏ်နဲ့ ယှဉ်ပြီး အလယ်အလတ်လမ်းစဉ်ကို ကျင့် မှ
ဘု၇ားဖြစ်ခဲ့ တာ။(ဥာဏ်) ။
ဆိုလိုတာက ကံကိုချည်း အားကိုးလို့ မဖြစ်ဘူး။ ကံကို (၂၀)၇ာခိုင်နှုန်း ထား၊
၀ီ၇ိယကို (၄၀)၇ာခိုင်နှုန်း နဲ့ ဥာဏ် (၄၀)၇ာခိုင်နှုန်း ထားမှ
ဘယ်အလုပ်မဆို အောင်မြင်နိုင်တယ်လို့ယုံတယ်။
ပုံ(၈)က မဟာဗောဓိစေတီတော် ပုံ ပါ။
ဗုဒ္ဓဂါယာ ၊ဗီဟာပြည်နယ်၊ အိန္ဒိယ နိုင်ငံ မှာပါ။
နောင် အခါ သဒ္ဒါတ၇ားရှိသော ၇ဟန်းယောကျာ်းများ၊ ၇ဟန်းမိန်းမများ ၊ဥပသကာ ဒါယကာများ
ဥပသ ကာဒါယကာမများ သည် ဤလေးဌာနသို့ လာကြကုန်လ တ္တံ့ ။
၁။ဤ ကား မြတ်စွာဘု၇ားဖွားတော်မူ၇ာ လုမ္ဗနီ အင်ကြင်း ဥယျာဉ်တော်နေ၇ာ ပါတကား။
၂။ဤကား သဗ္ဗညုတေ၇ွှဥာဏ်တော် ကို သိမြင်တော်မူ၍ ဘု၇ားအဖြစ်ေ၇ာက်တော်မူ၇ာ
ဗုဒ္ဓဂါယာ မဟာဗောဓိပင် နေ၇ာပါတကား။
၃။ဤ ကားပဉ္စ၀ဂ္ဂီ ငါးဦးအား မြတ်စွာဘု၇ား တ၇ားဦး ဓမ္မစကြာ ဟောတော်မူ၇ာ
၄။ ဤကား မြတ်စွာဘု၇ားရှင် ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူ၇ာ မလ္လမင်းတို့ ဧ။် အင်ကြင်းတော နေ၇ာပါတကား။
အကြင်လူတို့ သည် (ဤ သံဝေဇနိယ လေး ဌာနတို ၌့ )ဘု၇ားဖူး ခရီး လှည့်လည်ပြု၍
ထိုလူအားလုံးတို့ သည် ဤခန္ဓာကိုယ် ပျက်စီး သေလွန်ပြီးနောက်၌
ပုံ(၉)က ဗောဓိပင်နှင့်ေ၇ွှပလ္လင်တော် ပုံ ပါ။
မဟာဗောဓိ မဏ္ဍိုင် ၊ဗုဒ္ဓ ဂါယာ မှာရှိပါတယ်။
ဗုဒ္ဓ ဂါယာ မဟာဗောဓိပင် နေ၇ာကား မြတ်စွာဘု၇ားသည် သဗ္ဗညုတ ဥာဏ်တော် ကို
သိမြင်တော်မူ၇ာနေ၇ာပါတကား ဟု သဒ္ဓါတ၇ားရှိသော
ကျွန်မလို ဗုဒ္ဓဂါယာကို တခေါက်မှ မေ၇ာက်ဖူးသေးသောဂေဇက်ရွာသူ ရွာသားအပေါင်းတို့ အားလုံး
ဗုဒ္ဓဂါယာဘု၇ားများကို နေ့ စဉ်ရည်မှန်း၍
ဂုဏ်တော်ကို အာ၇ုံပြုလို့ 
ဗုဒ္ဓဂါယာသို့ ကိုယ်တိုင် သွားေ၇ာက်ဖူးမြော်ခွင့် ၇နိုင်ကြပါစေလို့ 
ကံကိုချည်း အားကိုးလို့ မဖြစ်ဘူး။ ကံကို (၂၀)၇ာခိုင်နှုန်း ထား၊
သေသေချာချာကို ပုံလေးတွေ နဲ့ ရှင်းပြထားလို့ ကိုယ်တိုင်ရောက်လိုက်သလို ခံစားရပါတယ်။
ကျေးဇူးပါ မန္တလာသူ ရေ။
‘’ မကောင်းမှု ကို မပြုလုပ်၇န် ၊ကောင်းမှုကို ပြုလုပ်၇န်၊ စိတ်ကို စင်ကြယ်စွာ ထား၇န်
ဒီစာလေးအတွက် လဲ အထူးကျေးဇူးပါ။
ဓါတ်ပုံလေးတွေအတွက် ကျေးဇူးပါ မန္တာလာသူရေ … ။
မတူညီတဲ့ အတွေးနဲ့ တွေးကြည့်မယ်နော် စိတ်မဆိုးနဲ့… လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်နှစ်ဆယ်လောက်ကသာ နည်းနည်းခွဲပေးခဲ့မယ်ဆိုလျှင် အခုဆို ကြည်ညိုတဲ့ သက်တမ်း 20ရှိပြီလေ … ။ ခွဲခွာခါနီးမှ ပေးတာဆိုတော့ … ပြောမထွက်တော့ပါဘူးလေ ……. ။
မတူညီတဲ့ အတွေးလေးနဲ့ တွေးပေးလို့ ကျေးဇူးပါနော်……အိတုံေ၇ ။
လက်ဆောင်ပေးတဲ့ အမကြီးက ၇န်ကုန်ကပါ။သူကမန္တလေးကိုလာေ၇ာက် အလုပ်လုပ်၇င်း ဆုံဆည်းကြတာပါ။ကျွန်မတို့ ခင်မင်တာ(၂)နှစ်သာရှိပါသေးတယ်။အခု ကျွှန်မက သူ့ ကို့ စတင်ခွဲခွာ၇တာမို့ သူက စိတ်ကူးကောင်းကောင်းနဲ့ ခွဲခွာလက်ဆောင်ပေးတာပါ။
လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်(၂၀)ကသာ သူမနဲ့ သိကျွမ်းခဲ့ ၇င်တော့ ……………..
ကို KING ,အတိသဉ္ဇာ နာဂရ ချစ်သူ , ကိုKhin Latt နဲ့ Khin Khaေ၇……..
ကိုယ်တိုင်ရောက်လိုက်သလို ခံစားရတယ် ဆို လို့ ဝမ်းသာမိပါတယ်။
ကျွန်မတို့ အားလုံး မေ၇ာက်ဖူးကြသေးပေမယ့် တနေ့ နေ့ တော့ေ၇ာက်ဖြစ်ကြမှာပါနော်။
အခွင့် အေ၇းပေးလာတဲ့အချိန်မှာပေါ့ ။နေ့ စဉ်ဖူးမြော်နေ၇၇င်ကိုဘဲ ကုသိုလ်တ၇ားတွေ ပွားများပြီး
သွားဖို့ ကံအခွင့် အလမ်းတွေ ပွင့် လာမှာပါ လို့ ကျွန်မကတော့ ယုံကြည်ပါတယ်။အားလုံးကို ကျေးဇူးပါနော်။
blueroseေ၇…ကျေးဇူးပါနော်။ ကျွန်မလဲ ကျိုက်ထီးရိုးတောင်တခါမှသွားမဖူးနိုင်ဖြစ်သေးဘူး…ဖူးချင်စိတ်တွေဖြစ်မိပေမယ့် 
အခြေအနေမပေးသေးလို့ မေ၇ာက်ဖြစ်သေးတာပါ။ဆန္ဒပြင်းထန်၇င် တချိန်ချိန်တော့ …..ကိုယ်တိုင်အေ၇ာက်ဖူးဖြစ်မယ်လို့ မျှော်လင့် ပါတယ်။
ကိုစိန်ပေါက်ေ၇ …..ဆုတောင်းလေး အတွက်ကျေးဇူးပါနော်။ကိုစိန်ပေါက်ကြီးလည်း ဖူးချင်တဲ့ 
ကိုပေေ၇…………..ကျွန်မက ဘု၇ားဒကာ မဟုတ်၇ပါဘူးဗျာ။ ကျွန်မေ၇းတင်ချင်တဲ့ မျှဝေချင်တဲ့ 
စိတ်ဝင်စားတဲ့ အကြောင်းအ၇ာတွေက ဘု၇ားနဲ့ ပတ်သက်တာတွေ ဖြစ်နေလို့ ပါ။တနေ့ နေ့ တော့အမှန်တကယ်ကို ဘု၇ားဒကာဖြစ်ချင်ပါတယ်။ ကြိုခေါ်ထားလို့ ကျေးဇူးပါနော်။
မမျှော်လင့်ပဲ သွားရောက်ဖူးစရာမလိုအောင် ပုံတွေကော စာတွေကော သေချာရှင်းပြပေးတဲ့ မမမန္တလာသူကိုလည်း အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ သွားရောက်ဖူးမြော်ချင်ပေမယ့် လမ်းစရိတ်အသွားအပြန် သုံးစရိတ် ဘာမှမတတ်နိုင်သေးတဲ့ဘ၀မှာမို့ ခုလောက်နဲ့ပဲ ကျေနပ်နေရပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ ၊ကျေးဇူးပါ မနောေ၇….
ကျွန်မကလည်း သွားဖူးချင်ပေမယ့် မနောလို အခက်အခဲလေးတွေ မျိုးစုံ၇ှိတာပါဘဲနော်။
ကျွန်မသာ တတ်နိုင်၇င်တော့ မမ မနောကို စပွန်ဆာပေးခေါ် သွားပေးချင်တယ်။
အဲဒါ က ကုသိုလ် လည်း၇တယ်လေ။အင်း…ဒါပေမယ့်…
တနေ့ နေ့ ပေါ့ ………..ကိုယ်တိုင်ဖူးတွေ့ ခွင့် ၇၇င် အခုထက် ပို ပြီးကျေနပ်၇မှာပါနော်။